Manni murtii namootni sadii haleellaa Gariisaa raawwachuu mirkaneesse - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright CGTN Africa
Haleellaa Keeniyaa Yuunvarsiitii Gaarisaatti bara 2015 raawwatee tureef namootni himataman sadii irratti murteen dabafame.
Haleella Gaarriisaa kan hidhattoonni afur namoota 148 itti ajjeefaman irratti, Mohaammad Alii Akibar, Rashaad Chaarlis Bareeseroo fi Hassan Idin Hassan karoorsuun yakkicha raawwachuu isaaniitu irratti mirkanaa'e.
Namoonni 148 ajjeefamanii turan keessaa irra caalli isaanii barattoota turan.
Namoonni sadan kunneenis garee milishaa Al-shebaab waliin hidhata qabaachuun mirkanaa'uutu himame.
Himatamaa arfaffaa kan ture Saahal Diriyee Huseen ammoo bilisaan gaggeefameera.
Abbaan Alangaa Firaans Andaayi akka jedhaniitti, sadan isaanii garee Al-shebaabiif miseensa ta'usaaniif balleessaan irratti argameera,'' jechuun AFPtti himan.
Abbaan murtii Firaansis Andaayi jedhaman'' namoonni sadanuu miseensonni gartuu shororkeessitoota Al-shebaab ta'uun aleellaa kana raawwatanii'' jechuun AFP tti himan.
Sadan isaanii aleellaa kana qindeeessuu abbaan alangaa mirkaneeffateera, shakkii hin qabnu jechuun itti yaadani yakkaa kana raawwataniru kan jedhurratti odeeffannoo bal'aa kennuurraa ofqusatan.
Imbaasi Ameerikaa hidhattoonni Alqaayidaatti hidhata qaban bara 1988 aleeluun lubbuu namoota 200 oli galaafatetti aane,seenaa Keeniyaa keessatti aleellaa lubbuu namoota hedduu galaafate isa lammaffaadha.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti dargaggoota ol adeeman, ogeeyyiirratti ajjeechaa duuchatti raawwachuun guddina hawaas-dinagdee jeequu, akkasumas,biyyatti amantiin gargar qooduuf kan kaayyeffate ta'uu himan.
Aleellaa kanarratti hidhattoonni afur kan ajjeefaman yoo ta'u, aleellaa kana namtichi adda durummaan qindeesse Mohaammad Kunoon bara 2016 Somaaliyaatti ajjefamuutu yaadatama.
Haa'u malee, anga'oonni Keeniyaa odeeffannoo basaasaa aleellaan walqabatu hin qoratani, wayita aleellaan qaqqabus deebii quubsa hin kennine jedhamuun qeeqamu.
Dargaggeessa Somaaliyaa al-tokkotti dubartii lama fuudhe